Ukuhlukaniswa amasiko nokungokomoya kwabantu abamnyama - AFRIKHEPRI
Ukuhlukaniswa kwezomnotho nokomoya kwabamnyama
Buka ukuxoxwa (2018)
usuku lwesikhathi, june 11, 2020
I-5 min ifundwe
UJean Philippe Omotunde
INgakho-ke uyoziyeka kancane kancane aye enkingeni ephansi. Futhi ukufihla isimo sakhe, uzoba ngasentshonalanga futhi enze ngokudelela abafowabo “bohlanga”. Izimpikiswano zakhe zifanelwe i-neurotic engahleliwe. Kepha abelungu basungule yonke into, awukuboni, ”kusho umfundi osemncane wase-Afrika obhalise kwiScience Po. Ngibona ikakhulukazi isimo sokungazi kwakhe.
isihloko esibhekene negrophobia esezingeni lomphakathi, sakhetha ukugwema. Uba ngumphostoli wokuxubana, we-globalization, wokuphila kombhangqwana oxubile. Kuyena, kuyikhambi lenkinga yomhlaba. Uhlanganise ubutha bonembeza onolaka kepha wenqaba ukubhekana nakho.
Le ndaba icubungula ukuthi isiko lase-Afrika kanye ne-Afro-Caribbean lidlula isiko laseNtshonalanga elimele isimanje. Umlando wakhe, amasiko akhe awasamthandi, kungenxa yakhe kusukela kudala. Ufunda i-European Renaissance kepha uyamamatheka lapho sikhuluma naye nge-Renaissance yase-Afrika.
isifundo sizokwenza konke ukwenza izingane zakhe zenze, zicabange futhi zikhulume njengabantu baseYurophu abalungile. Uzozikhetha ngokucophelela amathoyizi nezincwadi azoba nazo ekhaya. Ngaleyo ndlela wenza amabhomu wesikhathi sangempela. Ngabona, ngokwesibonelo, intokazi emnyama ibizelwa esikoleni ukuze ichaze ukuthi kungani indodakazi yakhe emnyama yenqabile ngokwezifiso ukuvumela umfana omncane omnyama ukuba azohlala eduze kwakhe ekilasini. Kuwo lowo msakazo, uphenyo olukhulu olwenziwe e-USA lwembula ukuthi ukunikeza onodoli abamhlophe ezinganeni ezimnyama kudala ama-neuroses. Unodoli uyisandiso sikamama obekumele abukeke njengaye, masingakhohlwa.
Le ndaba yathandwa ukuqaphela ngolaka ukuthi okhokho bakhe base besukile esigabeni sokwenza imishanguzo engafundile bayiswa kubantu abaphucukile ngenxa yobugqila kanye nekoloni (inganekwane yomsindisi omhlophe). Ngaye, ukuhlasela kwaseYurophu nase-Arabhu kwaletha e-Afrika, amasu amaningi angawunakanga. Ngaphandle kwalokhu, ukholelwa ukuthi ukweleta inkululeko yakhe, emoyeni “wobuntu” wamaNtshonalanga (Schoelcher) kunawokhokho bakhe. Lokhu kungumphumela wokuqanjwa kwamanga komlando wezwekazi elimnyama, ubugqila kanye nekoloni. Lokhu kungumbono osacindezelayo u-Aurélie athi: "Ukuthula ngesikhathi sobugqila bekuhambisana nokuthula kobuqhawe bezinceku! Kakhulu kangangokuba kusukela ekuqothulweni kuka-1848, umbono we-Schoelcherist kuphela, inganekwane yomsindisi omhlophe, we-France emancipatory and mischievous, wagcinwa. Ngakho-ke, insizwa ethile yamemezela eFrance-Guyana ngoDisemba 2005, ukuthi ikoloni lalilethe amanzi kubantu base-Afrika ??? Le ndlela engenangqondo ihlala yondliwa isithombe sobuhlakani esinyakaziswa unembeza onolaka.
Isihloko sikholwa ukuthi isiko nombono waseNtshonalanga uphakeme kunamanye amasiko. “Sonke singamaGrikhi. Imithetho yethu, izincwadi zethu, inkolo yethu, ubuciko bethu bonke bunomsuka eGreece. ”(…)
Ngokungaphenyi komlando futhi ngenxa yokuthuliswa kwesikole, le ndaba yagcina ikholelwa ukuthi umbala wakhe wesikhumba ubuyisihibe kubuhlakani bomuntu. Unembeza onolaka, ngokwenza abakwaNegroe bakholelwe ukuthi okhokho babo babeyisigejane nje sezinto ezingelutho, kwaholela ekuweni kwe "African Self" yabo. Ukubona lokhu, kwanele ukubhekana nombuzo wabasunguli abamnyama nososayensi.
isihloko sifuna inkambu yokuthuthuka kwezenhlalo ukufihla imvelaphi yakhe yase-Afrika. Le ndlela ingathatha isimo sesisho ngolimi lwaseFrance oluyinkimbinkimbi kakhulu, ikilasi eliqaphelayo lomlingani womoya waseNtshonalanga, ukuqonda okukhulu kwezincwadi zaseNtshonalanga, ukukhethwa kwemoto enkulu ngenkathi uhlala emjondolo, wokukhetha okhethekile wezingubo zomkhiqizo owaziwayo, njll.
Kuyingozi enkulu kakhulu ngoba i-logic, ubuhlakani bokucabanga abukho ababhalisile. Indaba iyakholelwa ukuthi nguNkulunkulu womunye (mhlawumbe omhlophe) ozoba ngumendo wakhe. Akaboni ubumbano bezinkolelo, noma ubuntu bukaNkulunkulu, kepha ubona kuphela ukufana, ukuvumelana nokuzithoba emfundisweni yenkolo eyengeziwe yase-Afrika, okuyiyo ngokuvamile ebekwe icala nayo kusukela ebuntwaneni. Kuphela yisikhathi sakhe esidlule nesekoloni nokungazi kwakhe okungachaza lokho kuziphatha. Kuyena, inkolo yase-Afrika ingobuthakathi kuphela (umphumela wesenzo sezithunywa zevangeli) futhi ayikaze noma yenze ukuthi kube nomqondo wokuthi uNkulunkulu munye, umdali wezulu, umhlaba kanye nabantu. Sizobuyela kulokhu ngokuhamba kwesikhathi ngoba ukwahlukaniswa kwamasiko kule ndawo kungukuzinkanyezi.
isihloko sifuna ukubalekela konke okungamkhumbuza ubuntu bakhe, yingakho umusho ogcizelelwe u-Aurélie esanduleleni: "Ah cha, angimnyama, awubonanga ukuthi isikhumba sami simnyama kunesakho! ". Vula umagazini omnyama othengiswe kuma-newsagents futhi uzoqonda ukulimala kwengxabano yezomzimba. Uzothola izikhangiso ezingenakubalwa zemikhiqizo yokugcotshwa kwesikhumba, ukusikeka, amalensi wamehlo, ukuvuselela izinwele, njll. Embukisweni we-TV ongokoqobo ku-M6, intokazi enhle emnyama yaseGuadeloupe, emamatheka ku- "Bachelor", imemezele ukuthi inomsuka wase-Asia nase-Europe. Ukunganaki kwethu kubalekela imvelaphi yakhe yase-Afrika esinda kakhulu ukuyithwala. Njengoba u-Aurélie esasho: “Amahloni ngemvelaphi yakhe. Enamahloni okuthi aqhamuke kubantu base-Afrika. Ubunzima bokuphamba. Nokusingatha. Ukuphazamiseka kobunikazi. Ukuhlukaniswa ekucabangeni. Ukuvuma ukubuyela emuva kabili ". Kepha singeke sayisho kanjani le-anecdote? Ngesikhathi kuqhubeka ingqungquthela eholwa nguDoumbi-Fakoly eParis, indoda emnene yambuza umbuzo owacishe wangenza ngafa ngihleka. Ngokubucayi kakhulu umbuzo empeleni bekungokulandelayo: "Mnu. Fakoly, uma ucabanga ukuthi ukuphindukuzalwa kwaba ngesinye sezingxenye zokomoya lokhokho base-Afrika, ucabanga ukuthi ngelinye ilanga ngizokwazi ukuphinda ngiphinde ngizale kabusha eMhlophe?"
UJean Philippe Omotunde, inkulumo ye-Afrocentrist on Cultural alienation, P. 34,35,37
Inkulumo esemthethweni ekuhlukaniseni amasiko
31,00€ kukhona kusitoki
I-1 isetshenzisiwe kusuka ku- € 31,00
Thenga i-31,00 €
kusukela ngoJulayi 11, 2020 8:28 pm
Usuku lokukhulula 2006-03-09T00:00:01Z
Inombolo yamakhasi isihlangane 109
Usuku lokushicilela 2006-03-09T00:00:01Z
Umthelela wezobuciko namasiko kuzinzo kwezenhlalo yezepolitiki kwezwe
Ukuze ubeke amazwana, chofoza kusithonjana senhlalo osikhethile
Bona konke ukuphawula
Afrikhepri Foundation on Imvelaphi yezibalo kanye nemfihlo yovuko: "Opharao babhekwa "ngoJesu Krestu", "abathunywe" nguNkulunkulu emhlabeni ukuvumela ..." Jul 11, 18:14
Genevieve on Kungani amazwe ase-Afrika akhokhela intela yobukhosi eFrance naphezu kokuzimela kwabo?: "Uma ngabe le nkulumo iphathelene ne-Algeria, kufanele wazi ukuthi akekho ocele iFrance ukuthi izosilawula. Futhi uma wena…" Jul 9, 17:01
QHAFA UKUZE UVULE ISIMEMOx